Global Voices teny Malagasy » Mamelom-panantenana Ny Mpamaky Ny ‘Gazety Tokana Miabo Ao India’ · Global Voices teny Malagasy » Print
Mamelom-panantenana Ny Mpamaky Ny ‘Gazety Tokana Miabo Ao India’
Voadika ny 28 Febroary 2018 15:35 GMT 1	 · Mpanoratra VideoVolunteers Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Azia Atsimo, India, Fahalalahàna miteny, Fampandrosoana, Hafanàm-po nomerika, Hevitra, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Teknolojia, Vaovao Tsara, Zon'olombelona
Pikantsary avy amin'ny Gazety The Optimist Citizen
Nosoratan'i Madhura Chakraborty ity lahatsoratra ity ary niseho voalohany tao amin'ny VideoVolunteers , fikambanana iraisam-pirenena iray nahazo loka tamin'ny fampahalalam-baovaom-piarahamonina tao India. Navoaka ho anisan'ny fifanarahana fifampizarana votoaty ny tatitra naverina eto ambany.
Very fanantenana tamin'ny fomba fijery miiba omen'ireo gazety isa-maraina i Piyush Ghosh  sy Tuhin Kumar Singh , mpinamana tanora roa ao Bhopal , renivohitry ny fanjakana indiana ao Madhya Pradesh. Vokatr'izany dia lasa feno fiahiahiana ao anatin'ny tahotra sy ny fisalasalana ny fiarahamonina. Tsy mifampatoky intsony ny olona ary tsy matoky fikambanana, mpanao politika ary rafitra.
Nieritreritra izy roa ireo hoe, “Inona no mety ho vahaolana? Ahoana no fomba hanomezana aingam-panahy ny olona fa tsy hahatonga azy ireo ho tratran'ny fahakiviana? “
Nahita hevitra momba ny gazety iray feno vaovao tsara izy ireo nony avy eo. Ary feno azy ireo ankehitriny ny toerana maro any India amin'ilay gazety tsy manam-paharoa.
Nanangana ny gazety antserasera sy atao printy mivoaka indroa isam-bolana izy ireo ary nomeny anarana hoe ilay “gazety voalohany tena miabo sy manome vaovao tsara ao India”, tamin'ny volana Oktobra 2014, ary manana mpanjifa manerana an'i India izany amin'izao fotoana izao, izay mandray anjara kely amin'ny saran'ny fanjifana eo amin'ny 290 ropia indianina eo na 5 dolara amerikana isan-taona.
Tsy mifantoka afa-tsy amin'ny fanomezam-baovao miabo ihany  ny The Optimist Citizen (Olom-pirenena feno fanantenana), tantara avy amin'ny tantaran'aingam-panahy, avy amin'ireo maherifo tsy fantatra, ny fitantanana tsara, ary ny fihetsika fankaherezana izay matetika tsy resahan'ireo sehatra fampahalalam-baovao mahazatra noho izy ireny j tsy mampientanentana .
Nahatakatra ny zo voalazan'ny lalàm-panorenana sy ny adidiny amin'ny fandresen-dahatra ireo Vahoaka ao Harda i Saloni sy ny namany tamin'ny fampianarana ny zanak'izy ireo vavy eo ambanin'ny tetikasa Samvidhan Live! Tetikasa Jagrik andraisan'ny vahoaka anjara avy amin'ny ComMutiny – Firaisan-kinan'ny Tanora
Nanazava ny fomba nivoaran'ity gazety ity tao amin'ny lahatsary tatitra  iray ny solontenan'ny vondrom-piarahamonina Video Volunteers Ramlal Baiga :
“Nikarakara fivoriana kely azon'ny rehetra natrehina izahay tao amin'ny zaridaina iray teto Bhopal. Nanomboka tamin'io andro io dia nanomboka niasa ho an'ny fanontam-baovao voalohany, ny iraka ataonay sy ny fomba fijerinay izahay”, hoy i Tuhin.
Hoy ihany koa i Piyush hoe, “Mpandraharaha ara-tsosialy ny ray aman-dreniko ary tena manome aingam-panahy ny asan'izy ireo. Tsapako noho izany fa tokony hampiasa ireo tantara manome aingam-panahy isika mba handrisihana ny olona, fa tsy (hirona amin’)ireo vaovao miiba.”
Ary dia nanomboka ny dian'ny The Optimist Citizen.
Tsy nisy na dia ny iray aza tamin'ireo mpiara-manorina no nanana traikefa tamin'ny fampitam-baovao. “Tsy fantatray ny karazan-taratasy ampiasaina amin'ny fanontana gazety na ny fahasamihafana teo amin'ny gazety lehibe sy ny gazety mpanaitaitra ihany koa aza!” Hoy i Tuhin.
Raha ny marina, sady nianatra no nampitombo fahaizana tamin'ny gazety ny mpiasa rehetra. Niresaka momba izany làlana nodiavina izany i Tannson Matthews, talen'ny haivarotra, tamin'ny solontenan'ny vondrom-piarahamonina Ramlal Baiga. “Nahatsikaritra izahay raha vao nanomboka ny gazety fa nisy ny singatsingana isan-karazany mila hatsaraina,” hoy izy.
Na dia teo aza izany rehetra izany, dia mbola nahavita nanangana ny marika fampahalalam-baovao mahomby ihany izy roalahy ireo, niaraka tamin'ny fahavitrihana antserasera niainga tamin'ny tsy misy.
Nanazava tao anatin'ny antsafa  ho an'ny gazetiboky Entrepreneurship India i Tuhin :
Ny fampielezana vaovao amin'ny endrika voalanjalanja indrindra sy marina araka izay azo atao no anjara asan'ny fampitam-baovao. Saingy ny mifanohitra tanteraka amin'izany matetika no misy eto amin'ny tontolo manerantany. Tsapanay fa raha toa ka miteraka hetsika miiba toy izany ny vaovao sy ireo tantara ratsy, nahoana ary no tsy mamoaka sy manolotra tantara tsara izay afaka mitondra fiantraikany midadasika tsara kokoa.
Ireo tantara toy ny an'ilay zazavavy kely sahirana iray 10 taona izay mitantana ny trano famakiam-boky ho an'ny ankizy any ambany tanàna  misy azy, ny an'ilay lehilahy Israeliana iray izay tonga tany India ary namboly ny ala fihinana  tamin'ny tany ngazana mirefy 70 akra, ny an'ilay mpivady izay nanomboka ny orina mpanasoa ho an'ny ankizy  manana aretina tsy fahita firy taorian'ny nahafatesany ny zanany vavy kely iray, ny an'ilay mpanakanto Alema iray izay nanova ny tanànakely tany Himachal Pradesh ho sehatry ny zavakanto mba ho fampiroboroboana ny fizahan-tany sy ny fivelomana ao an-tanànakely sy ireo tantara maro hafa ihany koa. Ireo tantara ireo no nanome aingam-panahy anay ary mino izahay fa hanome aingam-panahy ireo olona an-tapitrisany maro kokoa izany.
Tena mampahery tokoa ny mamaky ny tantaran'izy ireo momba ny fanovana miabo tanaty fotoan-tsarotra. Nianatra fisantarana andraikitra sy fanaovana Samaritana Tsara Fanahy manerana ny firenena izahay fa tsy nanoka-toerana ho fampitam-baovao manome vahana ny fanaka antitra navelan'ny mpanao politika mamba noana, na ny resaka fifosana amin'ny pejy telo . Asongadina ao amin'ny fizarana samihafa ao amin'ny The Optimist Citizen ireo tantara izay tsinontsinoavin'ny fampahalalam-baovao mahazatra.
Afaka manaraka ny gazety ao amin'ny Twitter , Facebook  ary Instagram  ianao .
Ny Video Volunteers no mitantana ny tambajotra tokana amin'ny fitateram-baovao ao India izay mifantoka indrindra amin'ny fanolorana fanangonam-baovao mivelatra avy amin'ireo mahantra indrindra sy ireo distrika tsy mahita fampitam-baovao indrindra ao India.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/02/28/115181/
 niseho voalohany tao amin'ny VideoVolunteers: https://www.videovolunteers.org/indias-only-positive-newspaper-brings-readers-a-daily-dose-of-hope/
 Tuhin Kumar Singh: https://twitter.com/Tuhin_optimist
 fanomezam-baovao miabo ihany: http://india.ashoka.org/piyush-gosh-age-20-started-optimist-citizen
 lahatsary tatitra: https://www.youtube.com/watch?v=MsC9gK9l7E0
 tao anatin'ny antsafa: http://entrepreneurshipindia.co.in/articles/The-Optimist-Citizen-India
 resaka fifosana amin'ny pejy telo: https://en.wikipedia.org/wiki/Page_3_culture